Soomaali - Ka shaqeynta NSW
Home In another language Soomaali - Somali Soomaali - Ka shaqeynta NSW
Xuquuqdaadada aasaasiga ah ee goobta shaqada iyo masuuliyadaada
Ogow xuquuqdaada sharciga ah ee goobta shaqada iyo masuuliyadaada
Tusaha Xiriirka Shaqada NSW (NSW Industrial Relations).
Ku bilaabida shaqo tijaabo ahaan
Shaqo bixinta badankooda waxaa la sameeyaa wareysi ka dib.
Marka shaqo lagu siiyo, waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo inaad ku shaqeyso tijaabo ama xili tijaabo ah si loo arko inaad shaqada sameyn karto. Loo shaqeeyahaagu waa inuu kuu sheegaa intay noqoneyso wakhtigaaga tijaabada ahi iyo waa in lagaa siiyaa lacag shaqo kasta oo aad sameyso.
Haddii lagu weydiiyo inaad sameyso khibrad qaadasho shaqo oo aan lacag lahayn waa inay ahaataa urur tababar waxbarasho oo diiwaangashan sida dugsi, TAFE ama jaamacad.
Waa inaad ku heshaa shaqo siinta qoraal
Marka lagu siiyo shaqo, waa fikrad wanaagsan inaad weydiiso loo shaqeeyahaaga inuu ku sharxo qoraal shuruudadaha aad ku shaqeyndoonto iyo waxa lagaa filayo inaad qabato.
Warqadu waa inay ka mid tahay:
Magaca loo shaqeeyahaaga
Waxay shaqadu ku lugleedahay iyo liiska waajibaadkaaga
Inta lagu siin doono saacad kasta, todobaad ama labadii isbuucba
Haddii aad tahay shaqaale wakhti wakhti shaqeeya, mid wakhti dhiman ama wakhti buuxa shaqeeya
Waxaad ku shaqeyn doontid sida award ama heshiis
Ka hor intaadan ogolaan shaqo siinta
Waxaa laga yaabaa in lagugu shaqaaleeyo award ama heshiis. Haddii lagu weydiiyo inaad saxiixdo dukumiinti adoo ogolaanaya shuruudaha qaarkood, waa inaad marka koowaad si taxadar leh u akhrisaa. Ha dareemin in culeyskugu saarayo saxiixida isla markiiba ah, gaar ahaan haddii aysan kugu habooneyn.
Weydiiso loo shaqeeyahaaga wakhti aad ku tixgeliso dukumiintiga
Xor baad u tahay inaad heshiiska guriga u qaadatid oo ay kula akhriyaan dad kale oo aad ku kalsoon tahay. Waxaa laga yaabaa inaad doonto inaad raadsato tallo sharci ah ka hor intaadan go’aan gaadhin.
Haddii aadan hubin waxa ku saabsan shuruudaha heshiiska ee lagu weydiiyey inaad saxiixdo, la xiriir Khadka taleefanka ee Shaqada Cadaalada ah (Fair Work Infoline) 13 13 94.
Lacagta ugu yar ee qofka shaqaalaha ah la siin karo ama heshiis?
Nooca aad ku shaqeynaysaa wuxuu mid kood noqonayaa lacagta ugu yar ee qofka shaqaalaha ah la siin karo ama heshiis.
Raadi lacagta ugu yar ee qofka shaqaalaha ah la siin karo ama heshiiska daboolaya shaqada aad sameyso, maadaama ay daboolayso waxyaalahan sida mushaarka ugu yar la bixinayo, wixii heerar ganaax ah ee ay tahay in lagu siiyo oo dulmaraya waxa loo shaqeeyahaagu kaa rajeynayo inaad qabato iyo waxyaalaha aysan kaa rajeynaynin.
Ka wac Fair Work Infoline 13 13 94 si aad u ogaato lacagta ugu yar ee qofka shaqaalaha ah la siin karo ku khuseeya ama haddii goobtaada shaqadu uu khuseeyo heshiis.
Lacagta lagu siinayo
Loo shaqeeyahaagu waa inuu ku siiyaa ugu yaraan heerka lacagta ugu yar ee qofka shaqaalaha ah la siin karo ama heshiiska ama heerka mushaarka ugu yare e qaranka shaqaalaha ‘ka madax bannaan award’ Heerkani wuxuu ku tiirsanaan doona nooca shaqo ee aad qabato iyo wakhtiyada aad shaqeyso. Waxaa laga yaabaa in lagu siiyo wax ka badan heerka ugu yar.
Waxaa sidoo kale laga yaabaa in lagu siiyo gunooyin sameynta shaqooyinka qaarkood, lacag bixinta shaqeynta saacado ka baxsan saacadahaaga caadiga ah ama heerka gaaxa shaqeynta habeen dartii, sabtida iyo axada ama fasaxyada dadweynaha.
Loo shaqeeyahaagu waa inuu lacagta kuu siiyaa si joogta ah haddii aad weydiisato, waa inuu ku siiyaa lacagta ugu yaraan hal mar labadii toddobaad.
Loo shaqeeyahaagu kama jari karo wax lacag ah lacagtaada ilaa aad qoraal ku ogolaatay mooyaane ama sidaasbaana sharcigu uga baahan yahay. Wax lagama jari karo lacag bixintaada fasaxa sannadeed.
Waa in lagu siiyaa lacag cadaan ah, jeeg ama lacagta laguguugu soo shubaa xisaabtaada bangiga.
Loo shaqeeyahaaga waa inuu ku siiyaa warqada cadeynta lacag bixinta markaad hesho lacagtaada oo sharxeysa isla waxa lagu siiyey.
Heerarka Shaqada Qaranka (National Employment Standards)
Tobanka National Employment Standards (NES) waxay khuseysaa dhammaan shaqaalaha u shaqeeya loo shaqeeye gaar ah.
Marka loo eego NES shaqaaluhu waxay leeyihiin shuruudo shaqo ee ugu yar ee sharci ahaan xaqa u leeyihiin.
Marka lagu daro heerarka lacag bixineed ee ku qoran award ka ama heshiiska ama heerka mushaarka ugu yar qaranka, NES waxay sameynaysaa shabaqada ammaanka ee aan la bedeli Karin loo shaqeeyuhu si uu u faa’iido tiro shaqaalaha.
Heerarka Shaqada Qaranku loo shaqaale kasta?
tobanka NES waxay bixiyaan shaqaale kasta oo u shaqeeya loo shaqeeye gaar ah.
1. Saacadaha ugu badan ee shaqo toddobaadka – 38 saacadood toddobaadkii, marka lagu daro saacado macquul ah oo dheeraad ah.
2. Codsiga hagaajinta saacado kala duwan – waxay u ogolaaneysaa waalidiinta ama xannaaneeyayaasha leh ilmaha ka hooseeya da’da dugsiga ama ilmaha ka yar 18 ee leh iinta inuu dalbado bedelaada wakhtiga uu shaqeeyo si uu uga caawiyo ilmaha xannaanadiisa.
3. Fasaxa waalidka iyo waxyaalaha kale ee uu xaqa u leeyahay – ilaa iyo 12 bilood ee fasaxa aan lacagta lahayn ee shaqaale kasta, iyo weliba xaqa uu u leeyahay 12 bilood oo dheeraad ah oo lacag lahayn iyo weliba noocyo kale oo hooyanimo, waalidnimo iyo soo korsiga fasaxa la xiriira.
4. Fasax sannadeedka – 4 toddobaad oo fasax lacag leh sannadkiiba, iyo weliba toddobaad dheeraad ah oo ay leeyihiin qaar ka mid ah shaqaalaha xiliyada kala duwan shaqeeya.
5. Fasaxa shakhsiyeed/xaneeneeye iyo fasaxa naxariisashada ah -10 maalmood oo ah fasax shakhsiyeed/xaannaaneeye lacag leh, laba maalmood oo ah fasax xannaaneeye sida loogu baahdo iyo laba maalmood oo fasax u naxiiriisasho ah (oo aan la siin kuwa wakhti wakhtiga shaqeeya) ayaa looga baahan yahay.
6. Fasaxa adeega bulshada – fasax aan lacag lahayn ee waxqabadka xaaladaha degdega ah ee iskaa wax u qabsada ah iyo fasaxa adeega ka qaybgalka juryiga oo aad xaq u leedahay in lacagtaada lagu siiyo ilaa 10 maalmood oo ah adeega juriga.
7. Fasaxa adeega wakhtiga dheer - xaq u yeelasho si ay kuugu ururto fasaxa adeega dheer.
8. Fasaxyada dadweynaha - fasax lacag bixin leh ee 8da fasaxa dadweynaha ee qaranka iyo weliba fasaxyada dadweynaha ee dawlad goboleedka ama fasaxyada dadweynaha ee degaankaaga.
9. Ogeysiinta joojinta iyo lacagsiinta markaan laguu baahneyn – ilaa iyo 4 toddobaad ogeysiiska shaqo joojinta ( 5 toddobaad haddii shaqaaluhu ka weyn yahay 45 oo uu lahaa ugu yaraan 2 sanno oo shaqo xiriir ah) iyo ilaa 16 toddobaad oo ah lacagta rukhsada markaadan u baahneyn shaqaalaha, labaduba waxay ku saleysan yihiin dherarka shaqo.
10. Bixinta Qoraalka Macluumaadka Shaqada Cadaalada ah (Fair Work Information Statement) - loo shaqeeyayaashu waa inay siiyaan qoraalkan dhammaan shaqaalaha cusub.
Shaqaalaha wakhti wakhti shaqeeya
Shaqaalaha wakhti wakhtiga shaqeeya waxay helan lacag dheeraad ah oo la yiraahdo kordhin loading), si ay ugu maqdhowdo helitaan la’aanta fasaxa lacagta leh sida fasaxa jirada iyo fasaxyada kale, malaha xili ogeysiineed oo shaqo joojin ah mana laha wax ballan qaad shaqo ah.
Masuuliyadaada goobta shaqada
Shaqaale ahaan, waa inaad adeecdaa wax kasta oo sharci ah iyo tilmaamaha macquulka ah ee wax laguugu sheegayo ee uu ku siiyo loo shaqeeyahaagu iyo waa inaad ula shaqeysaa si aad u ilaaliso goobta shaqada ammaanka iyo caafimaadka.
Shaqadaada waxaa joojin kara adiga ama loo shaqeeyahaaga isagoo ku siinaya ogeysiin ku haboon, iyadoo la door bidayo qoraal inay ahaato.jeegaree award kaaga ama heshiiska heliyada ogaysiiska.
Loo shaqeeyuhu waxaa laga yaaba inuu ku ceyriyo:
Haddii aad leedahay qandaraas shaqo oo leh wakhti shaqo oo go’an gaadhayna taariikhdii uu dhammaan lahaa
Shaqo qabasho xun ama aan lagu qancin
Caafimaad dartii, haddii aadan qaban Karin waajibaadkii lagaa rabay ( laakiinse aan ahayn lix bilodd gudohood ka dib markii uu dhacay dhaawac goob shaqo)
Fal xumo weyn oo ula kac ah, oo sababi kara in lagu eryo ogeysiis la’aan.
Sidoo kale waxaa lagugu eryi karaa haddii ay shaqadu hoos u dhacdo ama shaqada dib u habeyn lagu sameeyey oo aysan shaqadii aad qaban jirtay jirin. Tan waxaa la yiraahdaa markii aan laguu baahneyn.
Jeegaree lacagta lagu siinayo ama heshiiska iyo NES wixii lacag dheeraad ah ee laga yaabo inay jirto.
Website-do muhiim ah iyo xiriiro
Taleefanka: 13 13 94